EmSculpt Factory |China EmSculpt Abavelisi kunye nababoneleli
Protable 4 izibambo emslimming umatshini imilo
Isixhobo sobuhle be-HIFEM sobuhle, esisebenzisa eyona iphambili (HIFEM) itekhnoloji yokungcangcazela kwemagnethi egxininise kakhulu, ivuselela ngokuthe ngqo ii-motor neurons, ukuze izihlunu zomzimba ziqhubeke nokwanda kwaye zicutheke. umthambo) I-pulse yamandla yemizuzu engama-30 yonyango inokuvuselela ama-30000 ekuqina kwezihlunu ezomeleleyo, ezinceda iiseli ezinamafutha ukuba zidibanise kwaye zibole ngamandla.Ngexesha elifanayo, ngokuqiniswa kwemisipha, kuzisa amava obuchwepheshe obutsha bokubunjwa komzimba.
Ems umzimba ukubumba umfanekiso oqingqiweyo System Emslim Machine Emt amafutha ilahleko isivuseleli Umzimba Ukubhitya izihlunu ukuvuselela umatshini ubuhle
Ngokukodwa ngokufanelekileyo kwi-buttocks kunye nesisu, i-EM Slim isebenzisa iteknoloji ye-High-Intensity Focused Electro-Magnetic field ukuze ibangele ukuqhuma okufutshane kwe-muscle contractions enamandla ekhokelela ekunyuseni kwemisipha, ukunciphisa umthamo, ukuchazwa okungcono, kunye nethoni ephuculweyo.
I-EM Slim kuphela kwenkqubo yokunceda abasetyhini kunye namadoda ukwakha izihlunu kunye nokutshisa amanqatha kunye nenkqubo yokuqala yehlabathi yokuphakamisa iimpundu.Isebenza nge-contractions ye-supramaximal;izicubu ze-muscle zinyanzeliswa ukuba ziqhelane nemeko enjalo.Iphendula ngokuhlengahlengiswa okunzulu kwesakhiwo sayo sangaphakathi esibangela ukwakhiwa kwemisipha, ukuqinisa, i-toning kunye nokutshisa amafutha.
Umgangatho ophezulu we-Electro-Magnetic egxilwe kwi-Electro-Magnetic engangeneleli inkqubo yokuphakamisa iimpundu
Lo matshini we-SLIMCULPT usebenzisa i-high-intensity focused electromagnetic wave technology, i-high-energy-concentrated electromagnetic wave wave ingena ukuya kubunzulu be-7cm ye-muscle layer, ivuselela i-muscle motor neurons, iqalise ukucutshungulwa okuqhubekayo kwemisipha ye-autologous, yenza uqeqesho olugqithiseleyo, ukwenzela ukuba izihlunu zikwazi ukuhlaziya i-Deep. , oko kukuthi, ukukhula kwe-myofibrils (ukukhula kwemisipha) kunye nokuveliswa kwamatyathanga amatsha e-collagen kunye ne-muscle fibers (i-muscle hyperplasia), ngaloo ndlela uqeqesho kunye nokwandisa ukuxinana kwemisipha kunye nomthamo.
eziphathwayo zimagnethi eziphathwayo ems izihlunu stimulator ilahleko yamafutha slimming
Olu nyango lunokomeleza kwaye lwandise izihlunu ngelixa lunciphisa amanqatha.Unyango lokuphucula imilo yesisu kunye ne-hip kuthatha imizuzu engama-30 kuphela kwiseshoni yonyango enye.I-electromagnetic wave ingena ngokuthe ngqo kumaleko wezihlunu ze-7cm, elilingana namaxesha angama-30,000 wokufinyela kwesisu.Eyona nto ibaluleke kakhulu yintlungu ye-zero, akukho xesha lokulungiswa, akukho imitha, kwaye ikhuselekile kakhulu. Ngokuqhelekileyo, amaxesha e-4 zonyango kwiiveki ze-2 angabona iziphumo ezilungileyo.
I-Emslim Salon yasekhaya iSebenzisa i-Aesthetic Body Contouring i-Muscle Enhle ye-Ems Slimming Machine
Itekhnoloji ye-EMSlim Body slimming High Intensity Focused Electromagnetic (HIFEM) yokubhitya komzimba, ukuqinisa kunye nokutshisa amanqatha.Isixhobo sobuchwephesha seesaluni zobuhle kunye noogqirha abafuna ukunika abathengi babo okona kuhlaziyiweyo kunye nonyango olusebenzayo olungaphazamisiyo lokujonga umzimba.
I-EMSlim Ukunciphisa umzimba kwakha izihlunu kwaye kutshise amanqatha ngaxeshanye.Iipulse ze-Electromagnetic zenza izihlunu eziphezulu
ukucutheka okunyanzela izicubu zezihlunu ukuba ziqhelane, okukhokelela ekwandeni kokukhula kwezihlunu ngelixa kutshisa amanqatha nangona i-lipolysis.
Ephathekayo Yakha Izihlunu & Utshise umatshini waMafutha
I-EMS Body Contouring High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology (HIFEM) yokunciphisa umzimba, ukuqinisa kunye nokutshisa amafutha.Isixhobo esinobuchule kwiisaluni zobuhle kunye noogqirha abafuna ukunika abathengi babo okona kuhlaziywayo kunye nonyango olusebenzayo lwe-non-invasive body contouring. I-EMS Body Contouring yakha izihlunu kwaye itshisa amanqatha ngaxeshanye.Iipulses ze-Electromagnetic zibangela ukucutha kwezihlunu eziphezulu ezinyanzela izicubu zezihlunu ukuba ziqhelane, okukhokelela ekwandeni kokukhula kwezihlunu ngelixa kutshisa amanqatha nangona i-lipolysis.
I-Slimsculpt Body Slimming Massager Ukunciphisa Ubunzima bomzimba we-Anti Cellulite Umatshini wobuhle
Yakha izihlunu & Tshisa amanqatha Umatshini wokunciphisa umzimba, ukuqinisa kunye nokutshisa amafutha.Isixhobo sobuchwephesha kwiisaluni zobuhle kunye noogqirha abafuna ukunika abathengi babo okona kuhlaziywayo kunye nonyango olusebenzayo lwe-non-invasive body contouring. amafutha ngaxeshanye.Iipulses ze-Electromagnetic zibangela ukucutha kwezihlunu eziphezulu ezinyanzela izicubu zezihlunu ukuba ziqhelane, okukhokelela ekwandeni kokukhula kwezihlunu ngelixa kutshisa amanqatha nangona i-lipolysis.
Yakha isihlunu & Tshisa umatshini wamafutha
Izihlunu zokwakha eziphathwayo & Tshisa umatshini wamafutha
2 Umqheba okanye 4 Umqheba wokukhetha
Slim Beauty HI-EMT umatshini
Ukusebenzisa iTekhnoloji ye-Electro-Magnetic ye-High Intensity Focused Electro-Magnetic (HIFEM) ukuqhubeka nokwandisa kunye nekhontrakthi yemisipha ye-autologous kwaye iqhube uqeqesho olugqithiseleyo ukubunjwa ngokutsha kwesakhiwo sangaphakathi se-muscle, oko kukuthi, ukukhula kwee-muscle fibrils (ukwandiswa kwemisipha) kunye nokuvelisa amakhonkco amatsha eprotheyini. kunye ne-muscle fibers (i-muscle hyperplasia), ukwenzela ukuqeqesha kunye nokwandisa ukuxinana kwemisipha kunye nomthamo.
I-100% i-muscle ye-100 egqithisiweyo ye-muscle contraction ye-HI-EMT iteknoloji inokubangela inani elikhulu lokubola kwamafutha, i-Fatty acids iyaphulwa kwi-triglycerides kwaye iqokelelwe kwiiseli ezinamafutha. ikhutshwa yimetabolism eqhelekileyo yomzimba kwiiveki ezimbalwa.Ke ngoko, umatshini wobuhle obhityileyo unokomeleza kwaye wonyuse izihlunu, kwaye unciphise amanqatha ngaxeshanye.